Mesut Ozil Oo Soo Xushay Shaxdiisa SHAN Geesoodka Ah, Cristiano Ronaldo, Xiddigaha Arsenal Iyo Germany Oo Uu Uga Dhaartay – Laacibnet.net
Mesut Ozil Oo Soo Xushay Shaxdiisa SHAN Geesoodka Ah, Cristiano Ronaldo, Xiddigaha Arsenal Iyo Germany Oo Uu Uga Dhaartay
Mesut Ozil ayaa soo xushay shaxdiisa shan geeskoodka ah, waxaanu uga dhaartoy ciyaartoyda kooxdiisa hadda ee Arsenal, halka uu kasoo buuxiyey laacibiintii ay kusoo wada qaateen Real Madrid ee ay illaa hadda qaarkoodna sii joogaan Santiago Bernabeu.
Ozil oo 32 jir ah ayaa Arsenal usoo wareegay sannadkii 2013kii, waxaanu waqtigan ku dhibaataysan yahay Emirates Stadium iyadoo laga reebay liiska ciyaartoyda horyaalka Premier League iyo Europa League ciyaaraysa intaba.
Kulan ciyaareed caadi ah oo uu safto waxa ugu dambaysay bishii March ee sannadkan sii dhamaanaya, waxaana intii ka dambaysay ay u ahayd mar laga tuuro safka kooxda iyo mar uu kaydka ku caajiso, ka hor intii aan si buuxda loo go’aaminin in liiskaba laga tirtiro.
Kubbad-sameeyahan oo muddooyinkii dambe xubin firfircoon ka ahaa baraha bulshada, gaar ahaan Twitter-ka ayaa waxa uu soo xushay shax ka kooban shan ciyaartoy oo boos walba leh, waxaana uu gebi ahaanba ka saaray ciyaartoyda Arsenal iyo kuwa xulka qaranka Germany.
Ozil oo Jarmalka la qaaday Koobkii Adduunka ee 2014kii, kana soo garab ciyaaray xiddigo waaweyn waqtigiisii xulka, ayaa dhamaantood iska indho tiray mar uu ka jawaabayay su’aal laga weydiiyey Twitter-ka oo ahayd inuu shaaciyo shaxdiisa shan geesoodka ah.
Shuruudda la hor-dhigay Mesut Ozil markii su’aasha la weydiinayay ayaa ka yaraysay culayskii kaga iman lahaa dhinaca xulka Germany, sababtoo ah, su’aashan ayaa ahayd in kaliya uu min hal ciyaartoy kasoo xulan karo Brazil, Talyaaniga, France, Croatia iyo England, waxaanu taas kaga baaqsanayaa in lagu tilmaamo inuu si faquuq ah uga yimid ciyaartoyda waddankiisa Jarmalka oo uu isagu hore dhibaato uga tirsanayay.
Goolhayaha Talyaaniga ah ee Gianluigi Buffon ayuu usoo xushay goolhayaha kooxdiisa, iyadoo uu ogsoon yahay taariikhda dheer ee 32 jirkani uu ku leeyahay garoomada.
Buffon ayaa waddankiisa iyo kooxihii kala duwanaa ee uu usoo ciyaaray oo ay u badan tahay Juventus, waxa uu u saftay 1,094 ciyaarood, iyadoo uu garoomadana soo galay sannadkii 1995kii.
Difaaca ayuu usoo qaatay Marcelo oo ay Real Madrid u wada ciyaareen laga soo bilaabo 2010 illaa 2013kii oo ahayd waqtigii uu ka tegay Los Blancos, waxaanay ku wada guuleysteen horyaalka LaLiga iyo Copa del Rey.
Khadka dhexe ayuu usoo qaatay Luka Modric oo ay waqti kooban ka wada ciyaareen Santiago Bernabeu.
Karim Benzema oo qaabka isfahamkoodu cajiib ahaa waqtigoodii Real Madrid iyo Marcus Rashford ayuu u doortay afka hore ee kooxdiisa shan geeskoodka ah.
Shaxda kooxda shan-geesoodka dee Mesut Ozil